5 Astaamaha Macaamiisha Daacadda ah ee Dalabyadaada iyo Suuqgeyntaada. Martech Zone
5 Astaamaha Macaamiisha Daacadda ah ee Dalbashada Iibkaaga iyo Suuqgeyntaada
Jimce, Maarso 4, 2016 Sabtida, Maarso 5, 2016 Douglas Karr
Brett Evans waa tayo weyn oo iibinta maxalliga ah wuxuuna igula taliyay inaan akhriyo Iibinta Loolanka: La Wareegista Wadahadalka Macaamiisha mid ka mid ah doodeena badan ee ku saabsan iskudhafka iibka iyo suuqgeynta.
Iyada oo ku saleysan daraasad dhammaystiran oo kumanyaal ah iibka iibka ee ku baahsan warshado iyo juqraafiyo badan,Iibinta tartame wuxuu ku doodayaa in dhismaha xiriirka caadiga ah uu yahay qaab lumis ah, gaar ahaan markay tahay iibinta xalal adag, xalal ballaadhan oo ganacsi iyo ganacsi. Daraasadda qorayaashu waxay ogaadeen in iibiya kasta oo adduunka ka mid ah uu ku dhaco mid ka mid ah shan astaamo oo kala duwan, in kasta oo dhammaan noocyada noocan oo kale ah ay bixin karaan celceliska waxqabadka iibka, kaliya hal-tartame ayaa bixiya waxqabad joogto ah oo sarreeya.
Ma ihi taageere weyn oo buugaagta iibka ah. Had iyo jeer waxaan ka arkaa iyaga oo si xad dhaaf ah u riixaya oo riixaya habab dhiirrigelin kara dadka iibiya qaar ka mid ah, laakiin dhammaantood maahan. Waan ogahay dadka iibka cajiibka ah ee kobciya cilaaqaadka sanadaha badan isla markaana xiro qandaraasyo aad u tiro badan, waan ogahay dadka iibka ah ee lagu kalsoon yahay iyadoon loo eegin shirkada ay ka shaqeeyaan - macaamiisha u keenaya dal ilaa wadan, xitaa waxaan aqaanaa dadka iibka ah ee dibada ka baxa ee xiisaha u qaba. taleefanka maalintii oo dhan oo si uun ugu mashquuliya rajada daqiiqado yar gudahood si aad ugu kaxeyso tallaabada xigta.
Buugani waa mid aad u kala duwan - jabinta shaqsiyaadka iibka kala duwan iyo bixinta cilmi baaris aasaasi ah. Kaliya kamahadlayso dhiirigelinta iyo tabaha dadka wax iibiya, waxay siisaa aragti dhammaystiran waxa macaamiisha ay ka raadinayaan nidaamka iibka. Waxyaabaha soo socdaa waa astaamaha 5 ee ugu sarreeya, sida ay ukala muhiimsan yihiin, ee ay macaamiisha u raadsanayaan xiriirkooda wakiilka iibka:
Soo bandhigid aragtiyo gaar ah oo qiimo leh suuqa
Rep ayaa i caawiya marin habab kale
Rep ayaa bixisa talo socota ama la tashi
Rep ayaa i caawiya ka fogow miinooyinka dhulka lagu aaso
Rep wuxuu i baraa arrimo cusub iyo natiijooyinka
Miyaad aragtay adkaysi, xirfadaha gorgortanka, kor u kaca, xawaaraha lagu xidhayo, ama sifo kale oo ka mid ah kuwa 5-ta sare ah? Nope. Xaqiiqdii, labada astaamood ee soo socdaa waxay ahaayeen si fudud wax looga iibsado iyo haysashada taageero balaaran ururka oo dhan.
Arag wax la mid ah inta udhaxeysa nooca iibka ee khibradahaaga rajadaadu ay raadinayaan iyo nooca istiraatiijiyada suuqgeynta waxyaabaha aad u fulineyso rajooyinkaaga iyo macaamiishaada? Waxaan rajeynayaa, inaad aragto waxa aan arko! Aynu bedelno shuruudaha:
Mawduucaagu wuxuu bixiyaa aragtiyo gaar ah oo qiimo leh suuqa
Mawduucaagu wuu i caawiyaa marin habab kale
Mawduucaagu wuxuu bixiyaa talo socota ama la tashi
Mawduucaagu wuu i caawiyaa ka fogow miinooyinka dhulka lagu aaso
Mawduucaaga wuxuu i baraa arrimo cusub iyo natiijooyinka
Hoos u dhig! Dhammaan astaamahani waxay tilmaamayaan hal shay - dhismaha labadaba kalsoonida, maamulka, iyo qiimaha waqti ka dib rajada iyo macaamiisha. Ganacsatada ugu fiican ayaa og inay tani tahay sida ay u xidhaan heshiisyada… iyo waxyaabaha ugu fiican iyo kooxaha suuqgeynta bulshada ayaa og inay tahay sida ay u xidhi karaan heshiisyada, ama u kaxayn karaan rajooyinka iyagoo u maraya mashiinka beddelashada, ama ka caawinaya kooxahooda iibka inay ka faa'iidaystaan ​​tartanka.
Tags: biin adamsonwada hadalka macaamiishadaacadnimada macaamiishadaacadnimomattthew dixonsifooyinka iibkaiibinta tartame
25% Iibsashada Emailka ayaa ka dhacaya Mobilada
La Hadli karo: Xayeysiiska Dhaladka ah ee Booqdayaasha booqanaya